Nezvedu - Dongying Shengyu Metal Chigadzirwa Co, Ltd.
Dongying Shengyu Metal Chigadzirwa Chigadzirwa Co., Ltd. ikambani yakazara inobatanidza kuronga pamwe nekuburitsa uye kuunganidza, yakasarudzika akasiyana siyana epamusoro-giredhi chaiyo yekukanda uye zvigadzirwa zvemuchina, kunge zvidimbu zvemidziyo yemidziyo, pombi uye mavhavha zvikamu, zvigadzirwa zvemuputi, zvikamu zvezvitima zveguta, zvikamu zvemuchina wekudya, magetsi emagetsi. , Hardware yekuvaka, zvikamu zvemuchina wekurima uye mamwe marudzi emuchina zvikamu, izvo zvinonyanya kugadzirwa kubva pasimbi isina chinhu, simbi isina kupisa, kabhoni simbi, yakaderera chiwanikwa simbi, alloys yepamusoro tembiricha, alloys emhangura uye alloys ealuminium.
Kambani yedu ine yakazara seti yezvakanaka michina inosanganisira Computer Numerical Control lathe uye ekumusoro ekugadzirisa michina (kupukuta, kukuya nezvimwewo) zvekukanda, kupisa-kurapa michina, anti-ngura munyu mhute yekuongorora, kumanikidza kuyedza michina, yakakosha simba muyero muyedzo, CMM, spectrometer, tensile tester, metallographical maikorosikopu, kuoma tester, laser printer uye imwe michina kugona kuyedza michina. Isu takasimbisa hwakaomarara mhando vimbiso sisitimu uye inogona kupa iyo yese nzira sevhisi kubva kuexonentiation yeakarurama kukanda kune gungano uye zvapedza zvigadzirwa, izvo zvakawana zvakanakisa zvirevo kubva kune vatengi vedu muFrance, Germany, USA, Australia, Russia, Japan, New Zealand, Italy, Spain nedzimwe nyika nematunhu.
Iko kushanduka kwekambani kunotendera iyo yuniti kugadzirwa pamwe neyekuwandisa akateedzana kugadzirwa, kubva pakuvakwa kweforoma kusvika pakupedzisa kusvika kugoverwa kwezvikamu zvakaunganidzwa kuzadzikisa zvakasiyana siyana zvinodiwa kubva kune vatengi.Advanced machining michina uye chaiyo michina yekuyedza michina inovimbisa zvakakwana mhando yepamusoro yezvinhu zvekukanda uye goho repagore rinopfuura matani zana nezana ramazana.
Panzira yekuvandudza mune ramangwana, Shengyu achararama zvinoenderana nezvinotarisirwa uye acharamba achiedza kuita kuti vatengi vape zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvisingadhuri uye masevhisi anogutsa anoramba achizvipfuura, achizvikunda uye achizvivakawo ega kuti avandudze kukwikwidza kwebhizinesi.
Sangano rekambani: "Hapana hurema kune chigadzirwa chemhando, uye hapana zvichemo kubva kune vatengi."
Kambani chinangwa: "Kubudirira kunovaka marashi, uye kuvimbika kunokanda ramangwana."